एनआईसी एशिया बैंककोे नयाँ शाखा काठमाडौंको अनामनगर र चितवनको सौराहामा - हाम्रो देश
एनआईसी एशिया बैंककोे नयाँ शाखा काठमाडौंको अनामनगर र चितवनको सौराहामा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको दुई नयाँ शाखाहरु काठमाडौंको अनामनगर र चितवनको सौराहामा आश्विन १३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ अनामनगरस्थित अनामनगर शाखाको उद्घाटन लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले गरे । आजै चितवनको रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित सौराहा शाखाको उद्घाटन रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वनले गरे ।
यी शाखाहरु सञ्चालनमा आएसँगै सो क्षेत्रका ग्राहकहरुलाई यस बैंकको सेवा प्राप्त गर्न थप सहज हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।